သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ် မှာ ဘယ်နှစ်ကြောင်း ပါလဲ ပြီးရင် ဘာတွေဖြစ် တတ်သလဲ… – GaMone Media
သင့်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ် မှာ ဘယ်နှစ်ကြောင်း ပါလဲ ပြီးရင် ဘာတွေဖြစ် တတ်သလဲ…
လက်ဝါးပြင်က လမ်းကြောင်းတွေ လိုပဲ လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးတွေကနေလည်း သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ကောင်းကောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာ ပညာတတ်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူနဲ့ လူတိုင်းကြည့်ြ့ပီးတော့ နားလည်နိုင်တဲ့ နည်းလေးကိုသုံးပြီး…..
ကံကြမ္မာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကျွန်တော် တို့တွေ အခုပဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပုံမှန် ဆိုရင်တော့ သာမန်လူတစ်ယောက် မှာ လက်ကောက်ဝတ် မှာ လမ်းကြောင်း ၂ ကြောင်း သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်း ၃ ကြောင်းရှိတတ်ပါတယ်။ ထိုလမ်းကြောင်းတွေကတော့….
အပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို ပြပါတယ်။ လမ်းကြောင်းထင်ရှားပြီး တစ်ဆက်တည်းရှိမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာကို ပြပါတယ်။
လမ်းကြောင်းက တကယ်လို့ မှိန်းဖျော့နေမယ်၊ အပြတ်တွေများနေမယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းပြီးတော့ ကျန်းမာရေးကို အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို ပြပါတယ်။
ဒုတိယမြောက် လမ်းကြောင်းက ပျော်ရွှင်မှု နဲ့ အောင်မြင်မှုကို ပြပါတယ်။ ပထမ လမ်းကြောင်းလိုပဲ ဒီလမ်းကြောင်းကလည်း ထင်းပြီး ဖြောင့်တန်းနေမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်တွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရမယ်…..
စည်းစိမ်၊ဥစ္စာတွေရမယ် ဆိုတာကို ပြပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလမ်းကြောင်းညံ့တယ် ဆိုရင် ငွေကြေးအခက်အခဲ အမြဲကြုံရတတ်တယ် ဆိုတာကို ပြပါတယ်။
လူတိုင်းနီးပါးမှာ လမ်းကြောင်း ၂ ကြောင်းပုံမှန် ရှိတတ်ပေမယ့် လမ်းကြောင်း ၃ကြောင်း ရှိတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တတိယလမ်းကြောင်း ရှိတဲ့သူတွေက အရမ်းခိုင်မာ အားကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီး….
လူအများကတောင် ကြောက်ရွံံ့ရတဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ လမ်းကြောင်း က ထင်ရှားလေ ပိုပြီးတော့ အင်အားကောင်းလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလမ်းကြောင်းကတော့ အလွန် ကိုတွေ့ရခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး သက်တမ်း နဲ့ လည်းဆိုင်ပါတယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းသာ တကယ်လို့ ရှားရှားပါးပါးရှိပြီဆိုရင် အသက် အရမ်းရှည်ပြီး သားသမီးကံလည်း ကောင်းပါတယ်။
အားလုံးပဲ လိုရာဆန္ဒတွေပြည့်ကြပါစေ။ (လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်)
လကျဝါးပွငျက လမျးကွောငျးတှေ လိုပဲ လကျကောကျဝတျက လမျးကွောငျးလေးတှကေနလေညျး သင့ျရဲ့ ကံကွမ်မာကို ကောငျးကောငျး သိနိုငျပါတယျ။ လက်ခဏာ ပညာတတျစရာမလိုဘဲ အလှယျတကူနဲ့ လူတိုငျးကွည့ျွ့ပီးတော့ နားလညျနိုငျတဲ့ နညျးလေးကိုသုံးပွီး…..
ကံကွမ်မာ တဈစိတျတဈပိုငျးကို ကြှနျတောျ တို့တှေ အခုပဲ ကွည့ျလိုကျရအောငျ။ ပုံမှနျ ဆိုရငျတော့ သာမနျလူတဈယောကျ မှာ လကျကောကျဝတျ မှာ လမျးကွောငျး ၂ ကွောငျး သို့မဟုတျ လမျးကွောငျး ၃ ကွောငျးရှိတတျပါတယျ။ ထိုလမျးကွောငျးတှကေတော့….
အပေါျဆုံးလမျးကွောငျးက လူတဈယောကျရဲ့ ကနြျးမာရေး ကို ပွပါတယျ။ လမျးကွောငျးထငျရှားပွီး တဈဆကျတညျးရှိမယျဆိုရငျ ကနြျးမာရေးအရမျးကောငျးတယျဆိုတာကို ပွပါတယျ။
လမျးကွောငျးက တကယျလို့ မှိနျးဖြော့နမေယျ၊ အပွတျတှမြေားနမေယျ ဆိုရငျတော့ ကိုယ့ျရဲ့နထေိုငျစားသောကျမှုပုံစံကို ပွောငျးပွီးတော့ ကနြျးမာရေးကို အထူးဂရုစိုကျဖို့ လိုအပျတယျ ဆိုတာကို ပွပါတယျ။
ဒုတိယမွောကျ လမျးကွောငျးက ပြောျရှှငျမှု နဲ့ အောငျမွငျမှုကို ပွပါတယျ။ ပထမ လမျးကွောငျးလိုပဲ ဒီလမျးကွောငျးကလညျး ထငျးပွီး ဖွောင့ျတနျးနမေယျဆိုရငျ အောငျမွငျတှေ ပြောျရှှငျမှုတှေ ရမယျ…..
စညျးစိမျ၊ဥစ်စာတှရေမယျ ဆိုတာကို ပွပါတယျ။ တကယျလို့ ဒီလမျးကွောငျးညံ့တယျ ဆိုရငျ ငှကွေေးအခကျအခဲ အမွဲကွုံရတတျတယျ ဆိုတာကို ပွပါတယျ။
လူတိုငျးနီးပါးမှာ လမျးကွောငျး ၂ ကွောငျးပုံမှနျ ရှိတတျပမေယ့ျ လမျးကွောငျး ၃ကွောငျး ရှိတဲ့ သူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ တတိယလမျးကွောငျး ရှိတဲ့သူတှကေ အရမျးခိုငျမာ အားကောငျးတဲ့စိတျဓာတျရှိပွီး….
လူအမြားကတောငျ ကွောကျရှံံ့ရတဲ့ အစှမျးရှိပါတယျ။ တကယျလို့ လမျးကွောငျး က ထငျရှားလေ ပိုပွီးတော့ အငျအားကောငျးလပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလမျးကွောငျးကတော့ အလှနျ ကိုတှေ့ရခဲ့တဲ့ လမျးကွောငျးဖွဈပွီး သကျတမျး နဲ့ လညျးဆိုငျပါတယျ။ ဒီလမျးကွောငျးသာ တကယျလို့ ရှားရှားပါးပါးရှိပွီဆိုရငျ အသကျ အရမျးရှညျပွီး သားသမီးကံလညျး ကောငျးပါတယျ။
အားလုံးပဲ လိုရာဆန်ဒတှပွေည့ျကွပါစေ။ (လေးစားမှုဖွင့ျ ခရကျဒဈ)
Previous post အခါခါ ပြန်ကြည့်ချင် လောက်အောင် ညို့အားပြင်းလွန်း တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယို
Next post မင်းရာဇာရဲ့မိန်းမက ထောင် ထဲ မှာ သားယောကျာ်းလေး မွေးဖွားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းဇော် (ရုပ်/သံ)